Bartilmaameed, Fadlan xir xirmooyinka Digaagga | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 2, 2006 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Farriin furan oo loogu talagalay Bartilmaameedka:
Fadlan dharkaaga Digaagga ha uga tegin meel bannaan inta lagu jiro Halloween.
Fadlan dharkaaga Digaagga ha uga tegin meel la maro oo qof uu gashan karo iyadoo aan la ogaan.
Fadlan ha uga tegin Suudkaaga Digaag halkaasoo 17 sano jir ah uu gacmihiisa ka heli karo.
Fadlan haka tagin Suudkaaga Dacwadiisa halkaasoo aabe uu kuqarxi karo wiilkiisa 17 jirka ah $ 5 si uu ugu dhejiyo Suudka Digaagga oo uu dhabarka u maro dhamaan Super Target…
farxadda carruurta yar yar ee ku qaylinaysa, "Hooyo fiiri… waa nin Digaag ah!".
Fadlan iska dhig Digaagga Digaagga. Illaa aad rabto 17 jir aabihiis ah inuu aad u qoslo wuxuu u dhiman karaa wadno qabad maadaama wiilkiisa uu gacmaha ka furayo Digaagga Digaagga oo uu ku sii ordayo xagga hore ee dukaanka.
Bartilmaameed, fadlan xir xirmooyinka Digaagga.
Oktoobar 2, 2006 at 8:36 PM
Waxay u badan tahay inuu sameeyay digaag ka wanaagsan ninka subax kasta istaaga banaanka carpark magaalada dhexdeeda oo waraaqo siinaya. Yup - oo ku labisan dharka digaagga.
Oktoobar 3, 2006 at 9:31 AM
Taasi waa WACDAR. Waa inuu jiraa fiidiyow tan?!?!?! Fadlan Bill, waxaad dhahdaa waad awooday inaad ku hesho fiidiyow tan?!?!?
Oktoobar 3, 2006 at 4:52 PM
Ma waxaad tahay aabbe toddoba iyo toban jir labis digaag ah oo carruurta ka qosliyey iyagoo faraxsan, Douglas? Taasi way ka fiican tahay Santa Claus!
Oktoobar 3, 2006 at 10:59 PM
Haa, aniga ayaa ah aabaha. Taasi wuxuu ahaa wiilkayga, Bill.
Oktoobar 4, 2006 at 2:02 PM
Waan ku raaxeysan lahaa inaan arko. Wiilkeyga ugu da'da weyn ma uusan u joogi laheyn suud digaag, laakiin labada kale maahan.